Dhiiga arjoomuun lubbuu marartuu haa baraarru
Dhiiga arjoomuun lubbuu marartuu haa baraarru Featured
Hir’innni dhiiga qaamaa keenya keessatti sababoota gara garaatiin mudata. Isaan keessaa sababa dhibee shukkaaraatiin, jeeqamuu qorruu dhiigaa /'blood clotting disorder'/fi tumboo xuuxuufaa eeruun ni danda'ama.
Sababa hir’ina dhiigaatiin lubbuu hedduu akka dhabaa jirru meeqan keenyatu quba qaba? Garuu osoo baraaruu dandeenyuu lubbuu hedduu dhabaa jirra. Dhiiga keenya kenninee lubbuu hedduu baraaruun hojii boonsaa ta’uun alatti yaaddoo du’aa gara jireenyaatti jijjiiruudha.
Tibbana dhimma kana ilaalchisee Ministeerri Eegumsa Fayyaa Federaalaa gaazexessitootaaf wayta ibse kennetti daarektarri olaanaan Baankii Dhiiga Biyyaalessaa Doktar Biraanuu Siyyum akka jedhanitti, sababa wal’aansa fayyaa kanneen akka wal’aansa onnee, kaansarii, kaleefi babal’achuu balaa tasaatiin keessumattuu balaa konkolaataatiin walqabatee barbaachisummaan dhiigaa daran dabalaa dhufeera.
Haa ta’u malee dhiyeessiin dhiigaa daran xiqqaadha. Ganna darbe baankiin dhiigaa biyyaalessaa dargaggoota hojii tola ooltummaarratti bobba’an wajjin ta’uun dhiiga yunitii 4532 walitti qabus fedhii jiruu waliin yommuu walbira qabamu daran xiqqaadha. Finfinneetti dabalaa deemuu baay'ina ummata magaalattiitiin walqabatee hanqina dhiigaa guddaatu jira.
Isaan dubbatanitti, hanqinni dhiigaa guddaan kan mudatu tibbaa soomanaa akkasumas baniinsaafi cufiinsa manneen barnootaarratti. Kana malees, namni dhiiga gumaache tokko lammata gumaachuu yoo xiqqaate baatii sadii oliif turuun waan irraa eegamuuf kun mataansaa hanqina mudatuuf sababa ta’a.
Haa ta’u malee, baankii dhiigaa biyyaalessaa dabalatee giddugaleessawwan dhiigni itti walitti qabamu ja’a hundeessuun sochii dhiiga walitti qabuu bal’inaan taasifamaa jira. Ummatnis kana hubatee dhiigasaa gumaachuun lammiisaa du’arraa baraaruu qaba. Haaluma kanaan namni umuriinsaa 18-65tti jiru hirmaachuu akka danda’u daarektarichi ni hubachiisu.
Daarektarri Qunnamtiin Ummataa Ministeera Eegumsa Fayyaa, Obbo Ahimad Imaanoo akka jedhanitti, biyya keenya keessatti hojiin dhiiga gumaachuu kan eegalame bara 1928 yeroo lolli Xaaliyaanii waliin taasifametti namoota lola keessatti miidhaman wal’aanuuf ture.
Yeroo sanaa eegalee dhiiga gumaachuun ittifufeera. Kana dura dhiiga bilisaan gumaachuu caalaa gurgurachuuutu ture. Ta’us gabbisa hubannoo taasifameen waggoota sadan darbanii as dhiiga bilisaan arjoomuun eegalameera.
Haaluma kanaan dhaabbilee fayyaa biyyattii kuma 16 dhibba shaniifi hospitaalota keessatti hojiin dhiiga fuudhuufi kennuu saffisaa jira. Haala barbaadameen garuu dhiiga walitti qabuun hindanda’amne .
Hospitaalota biyyattii kanneen akka Xiqur Anbassaa, Phaawuloos, Minilikiifi Yakkaatit 12 keessatti barbaachisummaan dhiigaa daran olaanaa ta'uus ni ibsu.
Dhiyeessiin jiru garuu fedhii gadi. Kunis ummata miliyoona dhibbaa olitti tilmaamamuufi baay’inaan dargaggoon jiru keessatti waa'ee hanqina dhiigaa dubbachuun qaanii ta’uu mala. Dhiiga ji’a sadii keessatti bakkasaatti deebi’uu danda’u gumaachuurraa of qusannee lubbuu namaa bakkatti hin deebine dhabuun hunda namaa yaadchisuu qaba. Dhiiga gumaachuun lubbuu du’a oolchuun namas ta’e waaqa biratti gatii guddaa qaba jedhu.
Walumaagalatti, nama ta’anii lubbuu namaa osoo oolchuu danda’anii nama dhabuu caalaa waanti nama gaddisiisu hinjiru. Har’a dhaabbilee fayyaa keessatti sababa dhabamuu dhiigaatiin lammiilee du’aafi jireenya gidduu taa’anii harka keenya eeggatan hedduu waan ta’aniif yaaduufiin barbaachisaadha.
Torban kana/This_Week 43222
Guyyaa mara/All_Days 1468002